Amathiphu ama-5 abanesifo sikashukela ngaphansi kokuqubuka kwe-Virus-News-Sinocare
Izeluleko ezi-5 zesifo sikashukela ngaphansi kokuqubuka kwegciwane
Isikhathi: 2020-03-01 Hits: 196
NgoFebhuwari 22, iNational Health Commission isishintshe igama lesiNgisi elisemthethweni lesi sifo elibangelwe i-coronavirus yenoveli laba yigciwane, yamukela isihloko esadalwa yiWorld Health Organisation.
Yize ukuqubuka komqedazwe kuqhubeke isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-3, kusesikhathini sokuphathwa kwesikhashana ukunqanda ukusabalala, ikakhulukazi, amacala okutheleleka ayanda kwamanye amazwe, njengeJapan, iSouth Korea, i-Iran, njll.
Phakathi kokushona kwabantu okubikwe yikhomishini yezempilo kuzwelonke, kutholakale ukuthi iningi labo bekuyiziguli ezindala ezinezifo ezingamahlalakhona, okubalwa nesifo sikashukela. Njengoba abanesifo sikashukela besesimweni se-hyperglycemia isikhathi eside, ingcindezi ye-plasma osmotic yanda, i-phagocytosis yamaseli amhlophe egazi yayivinjelwe, futhi amasosha omzimba enqaba, okuyisizathu esenza abantu abanesifo sikashukela bachayeke kalula igciwane ukutheleleka.
Ngezansi kwalezizeluleko ezenzelwe abanesifo sikashukela ukuze bahlale beyimpilo enhle ngaphansi kobhubhane futhi babekwe yedwa.
1. Imithi eyanele ibaluleke kakhulu, njengemithi, imichilo yokuhlola ushukela egazini, izinaliti ze-insulin, njll.
Ngaphansi komqedazwe, ukuze kuncishiswe ubungozi bokungenelwa yizifo ezibhedlela nokugwema izixuku, iziguli eziningi zinganqanyulwa zivele zingayekeli imishanguzo yazo, okungakhuphula kakhulu ubungozi bokunciphisa i-ketoacidosis yesifo sikashukela nezinye izinkinga ezinzima. Imithi ejwayelekile iyimfuneko yokugcina izinga le-glucose lilawulwa, futhi izinga elizinzile le-glucose egazini lisiza umzimba ukuthi ulwe nalo igciwane.
Kunconywe ukuthi abanesifo sikashukela balungele amasonto ama-2-4 emithi, ukuqinisekisa umuthi oqhubekayo nokutholwa.
2. Ukuqalwa kwesikhathi kweglucose yegazi ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinga le-glucose lesikhathi eside nelizinzile elilawulwa ngaphakathi kohlu oluqondiwe kuyinto ebaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela, futhi ukuhlolwa kweglucose ejwayelekile ekhaya kubaluleke kakhulu.
Uma izinga le-glucose yegazi lilawulwa, ukuhlolwa kwe-FPG ne-2hPG okungenani izinsuku eziyi-1-2 ngeviki kuyadingeka. Uma izinga le-glucose yegazi lingalawuleki kancane, kunconywa ukuthi kuqashwe nsuku zonke, futhi kudingeka kulungiswe indlela odla ngayo kanye nemithi, bese ushukela wegazi ubuyele "ekuzoliseni" ngokushesha okukhulu.
Ngaphezu kokulinganisa, kufanele futhi baqophe noma bathwebule imiphumela yabo yokuhlolwa kweglucose. Kufanele bagcine ngenkuthalo odokotela babo benolwazi nge-glucose yegazi labo ngocingo noma ngemiyalezo lapho bengakwazi ukuphuma. Akufanele banganaki ukushintshashintsha kweglucose egazini noma bathintane nabantu ngaphandle kweziqu zobuchwepheshe.
3. Yenza umsebenzi omuhle wokubulala amagciwane ekhaya ukukhetha izimpahla ezilungele ukubulala amagciwane. Leli gciwane liyazwela ku-ray ye-ultraviolet nokushisa, ama-degree angama-56 Celsius imizuzu engama-30, i-ethyl ether, i-ethanol engama-75%, equkethe i-chlorine disinfectant, i-peroxyacetic acid kanye ne-chloroform nezinye izithambisi ze-lipid zingalichitha ngempumelelo igciwane bukhoma igciwane.
4. Silwe igciwane, indlela ephumelela kunazo zonke ukunqamula umthombo wokutheleleka futhi sinciphise isikhathi ungekho ekhaya. Lapho kufanele uphume kufanele ukhumbule ukugqoka isifihla-buso futhi wenze isibulali magciwane emuva ekhaya, uvimbele igciwane lesandulela ngculaza, uzivikele, ugeze izandla zakho kakhulu.
5. Naka ukuhlala usondla futhi usondla ngokudla okunempilo, qhubeka uzivocavoca futhi ugweme ukuhlala isikhathi eside. Ukuzivocavoca kungenye yezinto ezibalulekile zokugcina i-glucose ilawulwa, kwandise ukuzwela kwe-insulin, futhi kusize ukuqedela i-metabolism ye-glucose namanye ama-carbohydrate. Iziguli ezinesifo sikashukela ezineminyaka ephakathi nendawo nabadala zingahamba zikhuphukela egumbini ngalinye ekhaya, zihlala imizuzu eyi-15 kuye kwengama-30. Yenza umsebenzi wasendlini noma udlale nengane uze uqale ukubabaza nayo imibono emihle.
Akungabazeki ukuthi ukwesekwa okungcono kakhulu kwabezokwelapha abasebenza emgqeni wokuqala ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu ekuqapheleni ushukela wegazi ekhaya, ukubhekana nokuqubuka kwezifo zesayensi, ukunciphisa inani lokuhambela kwezokwelapha, kanye nokukhomba ngesikhathi izimpawu zokuthi kunobungozi obukhulu kanye nesidingo esiphuthumayo sokwelashwa ukwelashwa.
Uma nje sisonke sisemizamweni enzima yokuthwala ubhadane lwe-coronavirus noveli futhi sikhombise isimo sengqondo esikahle futhi esinokuzibophezela, sizoyinqoba impi yokulwa negciwane kungekudala.
Ikhasi Langaphambili: I-Q & A ye-Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip
Ikhasi elilandelayo: Isifo sikashukela sithinteka ekungenweni yi-Virus yenoveli